Ọhụrụ Amazon ikwughachi Dot bụ n'ezie eziokwu | Akụkọ akụrụngwa
Joaquin Garcia | | Ndị na-ekwu okwu, Automlọ akpaaka
Naanị ụnyaahụ, anyị maara na mwepụta nke ngwaọrụ n'ọdịnihu site na Amazon. Amaghị m ma ọ bụ n'ihi mmejọ ahụ ma ọ bụ n'ihi na e mere atụmatụ ya, mana taa Amazon ewepụtala ukara ụzọ ọhụrụ Amazon ikwughachi Dot, ọkà okwu maara ihe na ga-ewere Alexa, onye enyemaka na-akwadoghị ebe Amazon ikwughachi adịghị.
Ọhụrụ Amazon ikwughachi Dot incorporates ụfọdụ ọhụrụ atụmatụ tụnyere ya gara aga nlereanya ma ọ bụ ka a belatara mbipute nke a maara nke ọma Amazon ikwughachi.
Ihe ohuru Amazon Echo Dot nwere ihe ruru 7 igwe okwu maka ịge ntị ka mma
Ọhụrụ Amazon ikwughachi Dot nwere otu ọkà okwu ma ruo igwe okwu asaa iji bulie ụda ọ bụla n'ime ụlọ iji mee ka Alexa rụọ ọrụ ka mma. A ga - emezi Alexa na ngwa a, ọ bụghị naanị site na nnabata ụda dị mma kamakwa site na ngwaike dị ike nke na - enye ohere ka onye inyeaka rụọ ọrụ ngwa ngwa ma tinyekwa ya njikọ na ngwa Alexa ya mere, anyị nwere ike ijikwa ngwaọrụ site na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ smartwatch.
Amazon Echo Dot ka nwere uzo, nke ahụ bụ, ọ nweghị batrị ma ọ nwere ọkụ ọkụ nke ahụ ga-enyere anyị aka ịmata mgbe ngwaọrụ ahụ na-ege ntị ma ọ bụ na-arụ ọrụ ọzọ. Na mgbakwunye, Amazon ikwughachi Dot nwere Bluetooth na WiFi njikọYa mere, na mgbakwunye na ijikọ na Internetntanetị, a pụrụ ijikọ ngwaọrụ Amazon ọhụrụ na ngwaọrụ ndị ọzọ site na Bluetooth. Ọrụ ndị anyị na-ahụ na Amazon Echo ga-ahụkwa na nsụgharị a, gụnyere ohere nke ijikọ na ngwaọrụ ndị nwere ọgụgụ isi dịka oriọna ọkụ ma ọ bụ mkpọchi amamịghe.
Amazon Echo Dot mkpọsa $ 49,99, ọnụahịa dị ala karịa nke gara aga. Ebumnuche nke ọnụahịa a bụ ire karịa nkeji. N'ihi ya, na nke mbụ anyị na-ahụ otú nke a na ngwaọrụ Enwere ike zụta ya na igbe nke nkeji 5 ma ọ bụ 10. Ọbụna na ngwugwu ndị a, Amazon na-enye gị otu.
Onwe m echere na ihe ohuru Amazon Echo Dot bu ihe omuma, ma echere m na ime ka uzo di nma ga adi nma karie njiko njikọ, obu ezie na oburu na edozi ya, ndi mmadu agaghi azuta igbe Amazon Echo Dot multi-unit. Ma ọ bụ ma eleghị anya ee?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Automlọ akpaaka » Ọhụrụ Amazon ikwughachi Dot bụ ugbu a eziokwu
Ihe ọhụrụ Dell XPS 13 ga - enwe ụdị okike “rose gold”